रथयात्रा स्वंमसेवक उपसमितीको कान्छो संयोजक - Birat Sandesh
रथयात्रा स्वंमसेवक उपसमितीको कान्छो संयोजक
सोमबार, भाद्र ०२, २०७६ मा प्रकाशित
विराटनगरका युवा सन्तोष महत (सेन्ट्रों) नेपाल विद्यार्थी संघका जल्दो बाल्दो नेता हुन । सेन्ट्रो भदौ ७ गते विराटनगरबाट निकालिने रथयात्रामा कामगर्ने स्वंम सेवक उपसमितीको संयोजक हुन । रथयात्रमा स्वंमसेवक दलले भिड व्यवस्थापन लगायतका काम गर्न के गरिरहको छ सो विषयमा केन्द्रित रहेर सन्तोष संग गरिएको कुराकानीको सार
१. तपाँई कान्छो स्वंयम सेवक दलको संयोजक हो ?
म सन्तोस महत (सेन्ट्रो )३२ बर्ष भए । विराटनगरबाट यो भन्दा अघाडि भएका रथयात्रामा यु्वा समाजसेवी तथा विद्यार्थी नेता दाजु आदरणीय कृष्ण कार्की, सञ्जिव थपलिया, र हालका विराटगर ३ का अध्यक्ष विनोद बस्नेतले स्वयंम सेवक दलको संयोजको जिम्मेवारी समाल्नुभयो । यो भन्दा अघाडि त झन बुढा बुढा थिए । नाम त ठ¥याक्कै याद छैन । उहाँहरु भन्दा चँँहि कान्छो हो म ।
२ .स्वंम सेवकको काम के हो ?
स्वंम सेवकको काम भनेको कुनै पनि धार्मीक, साँमाजिक, साँकृतीक , राजनीतिक , आर्थीक कार्यक्रमका सहभागिहरुलाई व्यवस्थित गरेर कार्यक्रममा सरिक गराउनु हो । ति कार्यक्रमहरुमा जनताको जिउधनको समेत रक्षा गर्नसहयोग गर्ने परम कर्तव्य हो । भदौ ७ गते निकालीने राधाकृष्ण रथयात्रामा पनि भक्तजनहरुलाई व्यवस्थित तरीकाले रथको डोरि छुन दिने अर्थात रथको दर्शन गर्ने वातावरण मिलाउने काम हो ।
३. स्वंम सेवक कती हुनुहन्छ ? कस्ता युवा यु्वती स्वंम सेवक हुन पाउछन ?
६ सय युवा युवतीहरुलाई स्वयंसेवक बनाएर परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौ । एक सय युवा युवतीहरुलाई प्रशिक्षण दिई सकेका छौ । अरु युवा युवतीहरुलाई थप प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाएका छौ । स्वयंम सेवकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यलय मोरङका डिएसपी घनश्याम श्रेष्ठ र राजकुमार खिउजुले उहाँ ( स्वंम सेवकहरु) लाई प्रशिक्षण दिईरहनु भएको छ । थप अरुलाई पनि दिनु हुने छ । स्थानिय सामाजिक, धार्मीक, साँस्कृतीक, आर्थिक ,राजनितीक संघ संस्था र स्थानीय क्लबहरुमा सहभागि युवायुवतीहरुलाई स्वंमसेवक बनाईएको छ ।
४ .कसरी स्वंम सेवक परिचालन गर्नुहुन्छ ?
स्वंम सेवक दुई प्रकारका छन । एउटा विशेष स्वंमसेवक र अर्काे सामान्य । विशेष स्वंम सेवकले राधाकृष्णको युगल जोडि( मुर्ती) राखिएको रथलाई बाँधिएको दाँया र बाँया डोरि भित्र हुन्छन । तिनिहरुले भक्तजनहरुलाई डोरि तान्न अर्थात भगवानको दर्शन गर्न सहयोग गर्छन । त्यसमाथी अशक्त, असहायहरुलाई दर्शन गर्ने वातावरण बनाई दिन्छन । रथ तान्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिएको छ ।
शंकटकाल पछि रथ तान्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिईएको हो । नत्र त्यो भन्दा अघि स्वंयसेवकले नै तान्ने गर्थे । सामान्य स्वंम सेवक चाँहि रथको विश्राम स्थलहरुमा बस्छन र भिड व्यवस्थापन गर्ने बालबालीका जेष्ठ नागरिकहरुलाई रथको दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउनमा महत्व पुर्ण भुमिका खेल्छ ।
५. भिडमा चोरी नहोला भन्न सकिन्छ र ? त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
विगतका बर्षहरुलाई हेर्ने हो भने धेरै चोरीका घटना भएका छन । स्वंम सेवकहरुले चोरी गर्नेलाई पक्रेर प्रहरीलाई बुझाएका थिए । यसपालि पनि प्रहरीलाई सहयोग गछौ । चोर्दै गरेको भेटिए । पक्रेर प्रहरीलाई बुझाउछौ । विगतमा स्त्रीहरुका संवेदनशिल अंङगमा हात लगाउने तथा सुनतानेर भाग्नेहरुलाई पनि स्वंम सेवकहरुले पक्राउ गरेर प्रहरीलाई बुझाएको मलाई याँद छ । हामी सचेत छौ । प्रहरीलाई सहयोग गर्दै रथयात्रालाई सम्पन्न गर्ने छौ ।
६ यसपटकको रथायत्रामा अरु रथयात्राको भन्दा पृथक के छ ?
विराटनगरको तिन पैनी स्थित राधाकृष्ण मन्दिरबाट भगवान राधाकृष्ण को युगल जोडि (मुर्ती) लाई रथमा राखेर विराटनगर घुमाउने चलन पुरानै हो । वि स १९८८ सालमा खट यात्रा बाट शुरु भएको रथ यात्रा २०२५ साल आएपछी रथयात्रामा परिणत भएको हो । हरेक बर्ष केहि न केहि नयाँ हुने गरेको छ । यसपालि हेलिकप्टरबाट पुष्प बृष्टि गराईने कार्यक्रम तय भएको छ ।
७. अन्त्यमा के भन्न चाहानु हुन्छ ?
रथयात्रामा सहभागि हुन आउदा विलासीताका सामानहरु अर्थात सुन चाँदि , हिरा, मोती लगायतका गरगहना नलगाई दिनु होला । पर्स ,मोवाईल जस्ता सामानहरु नबोक्दा राम्रो । हाराउने डर हुन्छ । विलासीताका सामानहरु प्रयोग गरेर रथयात्रामा आएर घराएको खण्डमा आयोजक समीती जिम्मेवार हुने छैन । रथयात्राको दिन करिब दुई हजार प्रहरी खटिने छन । स्वंमसेवकले प्रहरीलाई सहयोग गर्ने हो । रथयात्रालाई सफल बनाउन हाम्रो महानगरबासीको सहयोग अपरिहार्य छ । त्यसैले सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।